ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 |2၏စာမျက်နှာ 86 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2018 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ (စာမျက်နှာ 2)
2018 NAB ပြရန်မှာ 6025 NAB ပြရန် Autoscript မှာ Display ကိုအပေါ်7NAB Show ကိုကို Preview Autoscript နှင့် Autocue Booth C12 ဧပြီလ 2018-2018, Las Vegas မှ Autoscript နှင့် Autocue ထုတ်ကုန်: Intelligent ချက်ချင်း Autoscript အဆိုပါ EPIC-IP19XL featuring က၎င်း၏ All-သစ်ကို Intelligent ချက်ချင်းမိသားစုကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် ဘက်ပေါင်းစုံ 24 လက်မအရွယ်အခွက်တဆယ်မော်နီတာနှင့် software ချက်ချင်း WinPlus-IP ကိုအတူ teleprompter ။ အဆိုပါဆုရ IP ကိုအကွာအဝေးယခုမှပေးပို့နေသည် ...
2018 NAB Show ကိုကို Preview Vinten Booth C6025 ဧပြီလ 7-14 Vinten ကုန်ပစ္စည်းများ Display ကိုအပေါ် 2018 NAB ပြရန်မှာ 2018 NAB Show မှာ, Vinten ထုတ်လွှင့်ကင်မရာကိုထောက်ခံမှုစနစ်များသည်၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောမိသားစုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှုထက်ပိုရာစုနှစ်တစ်ခုနှင့်အတူ, Vinten ရဲ့ဆုရကင်မရာဖြေရှင်းချက်အဆုံးမဲ့ချိန်ခွင်လျှာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံး-In-class ကိုရွေ့လျားမှုအရည်အသွေးဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ Vinten ရဲ့ ...
White Plains, နယူးယော့ - ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2018 - SMPTE®, အဘယ်သူ၏စံချိန်စံညွှန်းများအလုပ်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာတိုးတက်လာတစ်ရာစုထောက်ခံနှင့်သူ၏အဖွဲ့ဝင်ကမ္ဘာလုံးအထိချဲ့ထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် (ပီပီ), အများအတွက်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကွန်ယက်ကို မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးရှေ့ပြေးပုံစံ SMPTE အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်စဉ်ကိုသတ်မှတ်မယ့်ပထမဦးဆုံး-of-a-ကြင်နာရှေ့ပြေးစီမံကိန်း၏အောင်မြင်မှုကိုကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ SMPTE ...
AV စနစ်ဒီဇိုင်း & ဖြန့်ကျက်အင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: AV စနစ်ဒီဇိုင်း & ဖြန့်ကျက်အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Facebook ကတည်နေရာ: Menlo Park, CA အမေရိကန် (Menlo Park, CA) Facebook ရဲ့မစ်ရှင်ကလူအသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာအတူတကွကမ္ဘာကြီးရောက်စေဖို့ပါဝါပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှတဆင့်ကျနော်တို့ကမ္ဘာတဝှမ်းပြီးလူပေါင်းများစွာဆက်သွယ်ကုမ္ပဏီ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးတည်ဆောက်နေပါတယ်, သူတို့ကိုမျှဝေဖို့နည်းလမ်းတွေပေးသည် ...
entry level ကိုထုတ်လုပ်မှု
ရာထူး: Entry 'အဆင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ: NewView တည်နေရာ: Philadelphia တွင် PA ဆိုပြီးအမေရိကန်ရုံဘွဲ့ရ? သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုအခြိနျပိုငျးသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ရှာဖွေနေပါသလား သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Build? လိုအပ်: * ကင်မရာ * အယ်ဒီတာများ (အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် Premiere / နောက်ဆုံးဖြတ် /) * တွင်-cam (စတူဒီယိုအင်တာဗျူး) * ထုတ်လုပ်သူများ (စတူဒီယို / လယ်ကိုအပိုင်းပိုင်း) * သင့်သောဗီဒီယိုအလုပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့ link ကိုပေးပို့ပါ။ ယောဘသည်အမျိုးအစား: အပိုင်းအချိန်လိုအပ်သောပညာရေး: ဘွဲ့ရဲ့အပို >>
စတူဒီယို / ထုတ်လုပ်ခြင်း International
ရာထူး: စတူဒီယို / ထုတ်လုပ်ခြင်း International ကုမ္ပဏီ: Nutmeg ကို Creative တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်တစ်ဦးသမ္မတလောင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်, တစ်ဖွဲ့လုံးကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့် Nutmeg ၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားရှင်းပြနေတဲ့အဖုံးစာတစ်စောင်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပူးတွဲပါ။ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖုံးစာတစ်စောင်နှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မရှိဘဲ Applications ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းကအမေရိကန် Nutmeg ကို Creative ကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ကွန်ယက်များ, နှင့်အေဂျင်စီများထောက်ခံပါတယ် ...
Fremont, CA - ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2018 - Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်တန်းဖို့ချီကာဂိုအခြေစိုက်ကိုလိုနီများ၏ Colorist Lauren မာလီအသုံးပြုသောနှင့်လက်လီကုမ္ပဏီကြီး Kmart များအတွက်အများအပြားအမျိုးသားရေးထုတ်လွှင့်အစက်အပြောက်အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖန်တီးမှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သားသူတို့က, 2017 တစ်လျှောက်လုံးအတွက်ရာသီအလိုက်အစက်အပြောက်ကယ်နှုတ်ပုတ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအစက်အပြောက်အကြောင်းအရာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနေစဉ်ခဲ့ပါတယ် ...
ဘာစီလိုနာ, စပိန်, ဖေဖော်ဝါရီ 28, 2018 - Sobatech Group မှ SL, ထုတ်လွှင့်န်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူ, မကြာသေးမီကတပ်အားကစားဖြစ်ရပ်များတစ်အကွာအဝေးများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, 'start-To-finish ကို' 'စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲပေး။ ယင်း၏ခြုံငုံပစ္စည်းကိရိယာများသတ်မှတ်ချက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Sobatech ယင်း၏ MFL Links များ, MRK960 receiver, MTK952 transmitter, MPR50-IEM Wideband receiver, MTP40S Bodypack transmitter အပါအဝင် Wisycom ထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေး, ပါဝင်သည်ရန်၎င်း၏ကြိုးမဲ့ကိရိယာများအဆင့်မြှင့် ...
2 ၏စာမျက်နှာ 86«12345 » 102030...နောက်ဆုံး»